DHaq dhaqaaqyo Millateri ka Dhan ah Daacish iyo AL-shabaab oo ka Billawdey Deegaanada Puntland.
Soomaalida Sweden oo laga yaabo in Boolis dalkaasi qab qabtaan.
Booliska Sweden ayaa laga yaabaa inay qabqabtaan Soomaali sharciyo aan laga siin Sweden. Soomaalidaa ayaa darxumo kula nool Sweden. Waaxda socdaalka ayaa dalban karta in ay raraan dadkaa Soomaalida ah maadaama aysan heysan meelo si sharci ah ay ugu noolaadaan-Waa guryo. Wax ka baddalid lagu sameeyay sharciga magangalyo doonka dhawaan ayaa...
Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Soomaaliya,Jamaal Maxamed Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada xarunta ah ee Garoowe ,halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland. Booqashada wafdiga ka socda dowladda federaalka ayaa la xiriirta sidii wada-tashi ku aaddan wareegga koowaad ee Qorshaha Horumairnta...
Tartanka Madaxtinimo ee Dalka Kenya oo Billawdey iyo Uhuuro Kenyata Aragtidiisa.
County-gga Lamu ee Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxaa ku soo badanayay bilihii lasoo dhaafay weerarada ay geysanayaan xarakadda Al Shabaab. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Isniintii shalay booqday Gobolka Lamu, waxaana uu ka bilaabay Ololaha uu ku doonayo in dib loogu doorto madaxtinimada dalkaasi. Mr Uhuru, ayaa...
Golaha Amaanka ee QM ayaa Talaadadii shalay meel mariyay Qaraar waqtiga loogu kordhiyaya Xafiiska QM ee Soomaaliya oo la gaarsiiyay illaa 31-ka March 2019. Goluhu waxaa uu isla gartay muhiimadda taaageeradda howlgalka UNSOM Soomaaliya, gaaar ahaan taageridda dadaaladda Nabadda ee Dowlada Faderalka ah ee Soomaaliya iyo Nidaamka Dib u Hishiisiinta,...
Waxaa soconaya qabanqaabada sidii xilka madaxtinimo ee dalka Zimbabwe loogu dharin lahaa Emmirson Mnangagwe ayaaa ka soconaysa magaalada Haraare ee xarunta Dalka Zimbaabwe. Waxaa lagu wadaa in maanta oo ah maalin Jimco ah waqtiyada soo socda loo dhaariyo si KMG ah xilka madaxweynaha wadankaasi kadib markii dhawaan uu xilkii ka...
Dalka Imaaraadka Carabta oo lagu soo Dhaweeyey M/weynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Madaxweynaha dowladdda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo oo shalay ka anbabaxay magaalada Muqdisho ayaa gaaray dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha oo si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa kala hadli doona mas’uuliyiinta Imaaraadka arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo in Imaaraadku...
Dilalka Ka Dhaca Galmudug oo M/weyne Xaaf Ku Eedeeyey Dawladda Federalka Soomaliya.
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmdug ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe ee federaalka in ay ka danbeyso sida uu hadalka u dhiggay dilallka iyo dagaallada ka dhaca deegaannada Galmudug. Wuxuu sheegay in muddadii ay jirtay Galmudug aysan jirin wax u soo kordhay isaga oo arintaa ku sababay dhibaatooyin ka dhashay saameynta dowladda...
Wasiirka arrimaha gudaha S/land Cali Waran Cadde oo ka Hadley ciidamada S/land gelidii ay galeen Bali Cad dawlada federalka soomaaliyana eed dusha kaga tuurey.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamuud Waran-cadde, ayaa Dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay fad-qalalo ka waddo gobollada Bariga Somaliland. Sidoo kale, waxa uu sheegay in deegaanka Balli-cad inay ka saareen koox uu sheegay inay ku shirayeen oo abaabulayey shirar ka dhan ah Somaliland, isagoo ugu baaqay Cali Khaliif Galaydh...
Dadweynaha magaaladda Hargeysa, ayaa si weyn uga diidhiyey sicir bararka ka jirta lacagta iyo maceeshadda oo la korodhay, taas oo danyartii saameyn weyn ku yeelatay. Ganacsatadda yaryar ee suuqa gobonimo ee magaaladda Hargeysa ayaa mudaharaad ku muujiyey qiimo jabka ku yimid shilling Somaliland,isla markaana xukuumadda baaq u diray inay sicir...
Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay oo Is Xig Xiga Caawa Maqribnimadii Ka Dhaceen.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in qaraxyo is xigxigay ka dhaceen maqribnimadii caawa magaalada, iyadoo qarax hore lagu weeraray hotel lagu magacaabo Bilan. Qaraxa labaad oo ahaa mid uu fuliyay qof naftii-hure ah ayaa lagu qaaday Maxaaqi lagu magacaabo Bader oo ku taala bartamaha...